Track 14: Victory Sweet — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Oo kolkay i arkaan masraxa, ay jecel yihiin "in wiil ninka"
Waxay ku dhuftay play iyaga on songs, ay ii sacbiyaan iyaga oo ku taagan
Waxay jecel yihiin, "Waxaan sharad ku aadan wax badan oo iyaga ka mid ah la galinin ee guutooyinkiisa oo caag"
Sidaas daraaddeed markii aan odhan jiray dhawr sano ay adag tahay, waxay u malaynayaan inaan ciyaaro
Laakiin, idinku ma ogidin wiil noloshayda, aadan aqoon wiil noloshayda
Waxaad ma aqaano waxa ay la mid ahaayeen on my xaaskiisa
Ma aqaan dagaalka aan wiil
Iyaga in boholo joogta ah isku dayayaan in ay la dagaalamaan in cadaawayaashaydu ii
Oo markii aan aan mar dambe ma ay ula dagaalamaan yaabaa Wuxuu i keenay hoos u hooseeyo
Wuxuu iigu keenay hooseeyo, Waan ogahay in aan ma dhali karo load in
Waxay jecel yihiin "Waxaan maqli hadalladan aad isku haysaan guul laakiin waxaan arki khasaare aad"
"Waxaad u dabaal taaj laakiin waxaan arki, iskutallaabtiisana aad"
Taas macneheedu oo isku liddiga ah in aadan ku haboon in aad sanduuqa faraxsanaado
Waxaa laga yaabaa inaad ma oga 'ilaa aad ku socotaan Labada this of sharaabaad
Victor waxaa mid ka mid ah ma hooba guuleystay INNING_NUMBER toddobaad
maalintaas waxaan ula jeedaa marka cirka cirro libdhi baxay ka dibna
Waxaan ku guuleystay 'daraaddeed waxaan isaga wax la xukumi
taajkii qodxanta leeyahay aad tahay King
dhar guduudan aad haybad ma maradaadana karaa
Haa, waxay qodbay gacmahaaga, aad qodbay geerida
From iskutallaabta aad boqor ku ahaa
Boqortooyadaadu waa ogyahay dhammaad ma leh
Oh Ciise, aad ku wada guuleystay
Oh Ciise, guul (x2)
Cameron • December 8, 2014 at 12:47 pm • Reply
Wow. Haddaba mareego badan ayaa heestan erayadeeda ku qaldan. land, laakiin waad ku mahadsan tahay dhajinta kuwa dhabta ah! Had iyo jeer waan jeclaa heestan, runtiina aad ayaan ugu mahadcelinayaa qalbiga aad gelisay. Tani runtii waxay igu dhiirigelisay waqtiga saxda ah ee noloshayda, hadda waxaan ogahay inaan rajeynayo guusha Ciise, iyada oo aan loo eegin daciifnimadayda iyo halgankayga. Thanks mar kale, Trip!
Salvador Garduno • December 8, 2014 at 4:48 pm • Reply
Runtii waan la xiriiri karaa heestan oo ay ku jirto sheekada dambe, sidaad u qortay heestan iyadoo gawvi isku dayayay in uu ku nasto, Waxa kale oo aan la legdamayay daal tan iyo intii aan jiray 19 yrs jir. waxaan ahay 29 hadda, wax kasta oo aan ku dagaalamay heestan waxay noqdeen heestayda iyo iimaankayga. Waxaan Ilaahay uga mahad celinayaa isticmaalka adiga iyo muusigaaga. Allaha ku barakeeyo walaal. Waxaan ka baryayaa inuu kugu sii daayo dhiigga safarkaaga.
Ming • December 8, 2014 at 6:20 pm • Reply
Jidka la jecel yahay! Rajo oo u fiirso xagga daa'imiinta
BobbieRobinson78 • December 10, 2014 at 11:48 pm • Reply
Hees aad u wanaagsan.. ♡
Glori • December 12, 2014 at 9:05 waxaan ahay • Reply
heestan waan jeclahay. Waxaan la dagaallamayay cudurka kelyaha dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaana dhawaan la geliyay liiska tallaalka. Heestan waxa ay igu dhiiri galinaysaa in aan dagaalka sii wado. Waxa laga yaabaa inaanay ahayn ujeeddada ama macnaha heestaada, laakiin runtii way i caawisay. aad baad u mahadsantahay!
David • December 25, 2014 at 3:12 pm • Reply
Waad ku mahadsan tahay safarka heesaha. ;) Hees FIICAN!
Jaret • March 5, 2015 at 1:30 pm • Reply
Waa hees cajiib ah. Isla markii uu soo baxayay Rise, xaaskeyga ayaa timid waxaa laga helay MS. Heestu wali way na xiiqsaysaa iyadoo ku nool erayadaada. Runtii waa barako, heestaasna waxaan ku celcelin karnaa in aan xasuusanno in aan leenahay Guul Macaan oo Rabbigeenna ah. Mahadsanid, Trip, Si aad runta ugu wacdo dhammaan siyaabaha uu kuu hayo. Waxaa laga yaabaa inaadan waligaa fahmin waxa heesahaagu ula jeedaan kuwa badan, anaga oo aan ku jirno, Sannado badan ilaa maalintaas sharafta leh markuu ku tusi doono. Sii wad, walaalkiis!
Mike • January 1, 2016 at 11:24 waxaan ahay • Reply
Heestan marar badan ayuu dhegaystay,Ilaahay ha ku barakeeyo Safarka, waadna ku mahadsan tahay qoraalkan soo dhigay…kaliya hal faallo yar, qaybta jillaab,…Laga bilaabo ciidda ilaa waaberiga…Waxaan qabaa inay tahay Laga bilaabo Makhribka ilaa waaberiga. Sax?:)
nasiib wanaag • September 12, 2018 at 8:38 waxaan ahay • Reply
Tani waa mid ka mid ah heesaha aan ugu jeclahay safarkayga